ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်ဆင်း တစ်ချို့ရဲ လက်ရှိအခြေအနေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်ဆင်း တစ်ချို့ရဲ လက်ရှိအခြေအနေ
ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်ဆင်း တစ်ချို့ရဲ လက်ရှိအခြေအနေ
- ပန်း စံပါယ်
Posted by ပန်း စံပါယ် on Jul 29, 2014 in Creative Writing, Education, Jobs & Careers | 17 comments
ကျမရွာထဲကိုတော့ မကြာမကြာရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်မန့်တော့ သိပ်မရေးဖြစ်သလို အားပေးစကားနဲ့ စာရေးဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့သူတွေကို လေးစားသောအားဖြင့် ရေးချင်ပေမယ့် သိပ်မရေးတတ်လို့ မရေးရဲ မရေးဖြစ်ပါဘူး။ ဒီတစ်ခါတော့ စာနာစိတ်က တွန်းပို့နေလို့ ရေးမိလိုက်ခြင်းပါ။
ကျမသိတဲ့ ရေကြောင်းးတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်း တစ်ချို့ရဲအခြေအနေ ကျမကြားသိနေသလောက်ကို ပြောချင်နေတာ ကြာပါပြီ။ အခုတော့ အလျင်းသင့်လို့ ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်တက်ချင်ကြတဲ့ ကျောင်းသားအချို့နဲ့ မိဘများ သိစေချင်တာရယ် ဒါတွေကို သိထားတော့ အချိန်မလွန်ခင် ဘယ်လိုစီစဉ်သင့်သလဲဆိုတာကို စဉ်းစားလို့ ရအောင်ရယ်။ အခြားအခြားသော သက်ဆိုင်သူများ စာနာ နားလည်နိုင်စေရန်လည်း ပါပါတယ်။
အားထားရမယ့် အနာဂတ်မျိုးဆက် ရေကြောင်းးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအတွက် ၊ နိုင်ငံတော်အနာဂတ်အတွက်၊ ကုမ္ပဏီအတွက် အားလုံးအကျိုးရှိစေဖို့ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအကြား ရေကြောင်းးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကို မြေတောင်မြှောက်တဲ့အနေနဲ့ sea service ယူခွင့်နဲ့ ကျောင်းပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း သင်္ဘောတက်ခွင့်အတွက် သဘောတူထားခဲ့ကြတာ အားလုံးအသိပါ။ အဲဒီအပိုင်းကိုတော့ အကျယ်မပြောတော့ပါဘူး။ ပြောချင်တာက ကုမ္ပဏီက ​ရွေးချယ်​ထားပြီး သ​င်္ဘော တင်​မ​ပေးနိုင်​​ဘူး။ ကုမ္ပဏီက သူတို့လည်းတင်​မ​ပေးနိုင်​​လို့ ဒီကြားထဲ အခြားလိုင်းတက်​ခွင့်​​လည်းမပေးဘူးလို့ကြားတယ်​။ ဒီကုမ္ပဏီက​ရွေးချယ်​ခံထားရတာချင်းတူ​ပေမယ့်​ လိုင်းမတူလို့ဆိုတဲ့အ​ကြောင်းပြချက်​နဲ့ အချို့ မကြာခဏ (ပြန်​​ရောက်​တာ တစ်​ပတ်​ တစ်​လ​လောက်​နဲ့) ပြန်​တက်​ရတယ်​။ အချို့ကျ​တော့ sea service ၁ နှစ်​ယူပြီး 2/O လက်မှတ်ရ​ပြီး တစ်​နှစ်​​လောက်​ထိမတက်​ရဘူး။ အခြားလည်းလိုက်​ခွင့်​မပြုဆို​တော့ ကာယကံရှင်​သ​င်္ဘော သားနဲ့ မိဘ မိသားစုအ​နေနဲ့ ပင်​ပမ်းခဲ့သမျှ ​ အချိန်​​တွေ လူအား ​ငွေအား​တွေအားလုံး မိမိ မဆိုးမမိုက်​ မမှားပါပဲနဲ့ အလဟသဖြစ်​​နေတယ်​ဆိုတာအထင်းသားပဲ။ သ​င်္ဘောတင်​မ​ပေးနိုင်​ပဲ ဘာ​ကြောင့်​များ ​​ရွေးချယ်​တာလဲမသိ။ အစိုးရက မဖြစ်​မ​နေ တစ်နှစ်ကို အနည်းဆုံးဘယ်​နှစ်​​ယောက်​​ရွေးရမယ်​ဆိုတဲ့ သတ်​မှတ်​ချက်​ရှိ​နေလို့ အမည်​ခံ​ရွေးချယ်​ထားတာလား။ သ​င်္ဘောလိုင်းအတွက်​/ကုမ္ပဏီအတွက်​ လူ​မွေးထားတာလား။ အမည်ခံရွေးထားတာဆိုရင်လည်း လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသင့်ပါတယ်။ လူ​မွေးထားတာဆိုရင်​လည်း ကိုယ်​​မွေးထားတဲ့သူကို လုပ်​​ပေးသင့်​တာ လုပ်​​ပေးဖို့သင့်​ပါတယ်​။ ကိုယ်​​မွေးထားတဲ့သူ​တွေကို လုပ်​မ​ပေးချင်​ရင်​ လုပ်​မ​ပေးနိုင်​ရင်​ အစကတည်းက မ​မွေးသင့်​ပါဘူး ထိန်းချုပ်​မထားသင့်​ပါဘူး။ ​ရွေးချယ်​​မွေးမြူထားပြီး သ​င်္ဘောတင်​မ​ပေးနိုင်​ရင်​လည်း အခြားလိုင်းမှာ ​တစ်​​ခေါက်​တစ်​​လေဖြစ်​ဖြစ်​ လိုက်​ခွင့်​​ပေးသင့်​ပါတယ်​။ အဲလိုခွင့်​ပြုလိုက်​လို့ သူများဆီ​ရောက်​သွားမှာစိုးရင်​လည်း တစ်​ခြားနည်းလမ်းတစ်​ခုခုစီစဉ်​​ပေးဖို့သင့်​ပါတယ်​။ အခု​တော့ဘာနဲ့တူလည်းဆို​တော့ သူတို့​လေး​တွေရဲ့ဘ၀ အနာဂတ်​ကို ပိတ်​ပင်​တားဆီးထားသလိုဖြစ်ရုံသာမက မိသားစုအတွက်လည်း ထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့အပြင် နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်အတွက် အလားအလာရှိတဲ့မျိုးဆက်ကောင်းလေးတွေကို ချောင်ပိတ်ရိုက်သတ်နေတာနဲ့ တူနေတယ်။ ​ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဒီလိုင်း (သ​င်္ဘောသားလိုင်း)ကို​ရွေးချယ်​ထားမိ​လေ​တာကတစ်​​ကြောင်း၊ သင်​ယူထားတဲ့အရာ ရထားတဲ့ဘွဲ့အ​နေနဲ့​ရော လုပ်​သက်​အ​နေနဲ့ပါ အပြင်​မှာလုပ်စားလို့မရဘူးဆို​တော့ ဒီ​ရေ​ကြောင်းတက္ကသိုလ်​တက်​တာမှားတယ်​လို့ ထင်​မြင်​ယူဆမှတ်​ချက်​ချစရာဖြစ်​​နေတယ်​။ ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်​ကိုသာ မတက်ခဲ့ရင် အခြားတစ်နေရာမှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အားထားရတဲ့သူတွေ မိသားစု ပါတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံတော်အတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ အကျိုးပြုနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်နေမှာမလွဲပါဘူး။
အခုလို pending / holding / blocking လုပ်​ထားတာ​တော့ ကာယကံရှင်အတွက်​သာမက မိဘ ညီအစ်​ကို​မောင်​နှမ မိသားစုဝင်​​တွေအတွက်​ပါ အခက်​အခဲ​တွေ အဆင်​မ​ပြေမှု​တွေများစွာနဲ့ ရင်​ဆိုင်​​နေရတဲ့အပြင်​ ရေ​ကြောင်းတက္ကသိုလ်​အတွက်​လည်း နာမည်​​ဆိုးပြီး ​နိုင်ငံတော်အတွက်လည်း ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီက သ​င်္ဘော တင်​​ပေးမယ့်​အချိန်​ကို​စောင့်​ရုံအပြင်​မရှိ​လေ​တော့ ​ဒီ​ကျောင်းတက်​မိခဲ့ခြင်းအတွက်​ စိတ်​ပျက်​​နောင်​တများစွာနဲ့ ပဲ မိဘ​တွေရဲ့ လယ်​ယာအလုပ်​ကိုကူညီပြီး လယ်​ထဲဆင်းရင်း ကုမ္ပဏီက တင်​​ပေးမယ့်​ ​သ​င်္ဘော တက်​ရမယ့်​အချိန်​ကို​စောင့်​​နေသူအချို့ရှိတယ်​ဆိုတာ ကြားသိရတာ အ​တော်​စိတ်​မ​ကောင်းဖြစ်​မိတယ်​။ သူ့မိဘ ညီအစ်​ကို​မောင်​နှမ​တွေကို စာလည်းစာနာမိတယ်။ ကျမသိတဲ့တစ်ယောက်ဆို သူက သားသမီးထဲမှာ အကြီးဆုံးဆိုတော့ အငယ်​​တွေအတွက်​​အားကိုးစရာ​မျှော်​လင့်​ချက်​​မှေးမှိန်​ပြီ​ပေါ့။ ဒီအဖြစ်​ကိုသိတဲ့ ပတ်​၀န်းကျင်​မှာလည်း ​ရေ​ကြောင်းတက္ကသိုလ်​ဆိုတာကို ​ဘယ်​လိုထင်​မြင်​ယူဆ သတ်​မှတ်ကြ​လေမလဲ။​
(ငွေကုန်​ လူပမ်း အချိန်​ကုန်​တာပဲရှိတယ်​။ အလကားတက္ကသ်ိုလ်​ပဲလို့ ထင်​မြင်​ယူဆ မှတ်​ယူကြမယ်​ထင်​တယ်​။​အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ကလေးတွေဟာ ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ရဖို့ ဆယ်တန်းမှာကတည်းက အမှတ်များများနဲ့ အောင်ဖို့လိုပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အချို့ကဆို ဆေး တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အမှတ်ထက်ပင် မြင့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကလေးတွေရော လူကြီးမိဘတွေပါ ကိုယ်၊ စိတ်၊ ငွေ အများကြီးပင်ပမ်းခဲ့ကြရပါတယ်။ ဆယ်တန်းပြီးပြန်တော့လည်း တက္ကသိုလ်တည်ရှိရာနေရာက သိကြတဲ့အတိုင်း ကျောင်းသားတွေနေကြတဲ့ မြို့ပြနေရာနဲ့က အဝေးကြီးဆိုတော့ ကျောင်းသွားကျောင်းပြန်နဲ့တင် အတော်လေးပင်ပမ်းနွမ်းနယ်နေပါပြီ။ နယ်ကလာတက်တဲ့သူတွေဆို ပိုဆိုးပေါ့။ အဆောင်ငှားနေကြရတာ။ အဆောင်လခက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ် လောက်က ကြားမိလိုက်တယ် တစ်ယောက် ၇၀၀၀၀ ကျပ်(ခုနှစ်သောင်းကျပ်) ဆိုပဲ။ အခုလက်ရှိအဆောင်လခတော့ မသိသေးဘူး။ နယ်က မိဘတွေကတော့ အခြေအနေအမျိုးမျိုးပေါ့။ အချို့လည်း တတ်နိုင်သူရှိသလို အသင့်အတင့်အခြေအနေလည်း ရှိကြတာပေါ့။ အချို့လည်း တောင်သူလယ်သမားတွေပေါ့။ ရန်ကုန်ကကျောင်းသားတွေအတွက်ကတော့ နေစရိတ် စားစရိတ်အတွက် ၀န်တာမကြီးပေမယ့် နယ်ကလာတက်ရတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက်ကတော့ နေစရိတ် စားစရိတ် သွားလာစရိတ် အားလုံး ၀န်တာကြီးပါတယ်။ ခန့်မှန်းခြေတွက်ကြည့်တာ နယ်ကလာတက်ရတဲ့ကျောင်းသားအတွက် တစ်လကို နှစ်သိန်းလောက်တော့ကုန်မယ်ထင်တယ်။ ၅ နှစ်စာဆိုမနည်းဘူးပဲ။)
လက်ရှိအနေအထားမှာတော့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရထားပါလျက် အလဟသဖြစ်နေပြီး အလုပ်​လက်​မဲ့ မှီခိုဘ၀ဖြစ်နေတော့ ​ဆောင်းဦးလှိုင်​​ပြောတဲ့အဓိပ္ပါယ်​နဲ့ အံဝင်​တာ ဒါမှအစစ်​။ အဖက်​ဖက်​က အများ​ကောင်းကျိုးအတွက်(ကုမ္ပဏီ၊ သ​င်္ဘော သားနဲ့မိသားစု၊ နိုင်​ငံနဲ့ အနာဂတ်​)​ ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်​ရှိသူများ စာနာမှုနဲ့ တစ်စုံတစ်ခုဆောင်ရွက်​စေချင်​ပါတယ်​။​
ကျမကြားသိရတာတွေထဲက အချို့ကို ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် လွဲမှားနေတာရှိရင်လည်း ထောက်ပြပေကြပါရှင်။ သူများတွေလို ဖတ်ကောင်းအောင် စကားလှအောင် သွယ်ဝိုက်ပြီးမရေးတတ်ပဲ မိမိပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို တိုက်ရိုက်ပြောတတ် ရေးတတ်တော့ကာ အမှားပါခဲ့ရင်လည်း နားလည်ပေးကြစေလိုပါတယ်။ ကာယကံရှင်နဲ့ သူ့ရဲ့မိဘ မောင်နှမတွေကို စာနာစိတ်နဲ့ ကြားရတာ စိတ်မကောင်းဖြစ်လွန်းလို့ သူတို့အတွက် တစ်စုံတစ်ခုမျှော်လင့်ချက်များ ရှိလာမလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ရေးလိုက်မိခြင်းပါ။ ဒီလိုကိစ္စတွေအတွက် တစ်စုံတစ်ခု ကူညီဆောင်ရွက် ဖြေရှင်းပေးနိုင်သူများ ဒီရွာထဲမှာ ရှိမယ်လို့ ယုံကြည်မျှော်လင့်ချက်လည်း ပါပါတယ်။
အားလုံး စိတ္တသုခ ကာယသုခနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်……….
About ပန်း စံပါယ်
ပန်း စံပါယ် has written 8 post in this Website..
View all posts by ပန်း စံပါယ် →
အင်းပြသနာကတော့ —————– မပြောတော့တာကောင်းပါတယ်။ :byee:
ပန်း စံပါယ် says:
အဆင်ပြေရင်ပြောပေးပါရှင်။ ဒါမှ မသိတဲ့သူတွေ သိရပြီး သူတို့ လုပ်သင့်တာ လုပ်လို့ရမှာပါ။ ဘယ်လိုမှ ဒီမှာ ပြောလို့မကောင်းရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အားလုံး အဆင်ပြေသွားဖို့က အဓိကပါရှင်။ အားလုံးမဟုတ်တောင်မှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတော့ ဖြေရှင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
မသဲ ရေ ။
သင်တန်းက နာမည်ကောင်းတွေ ကြားနေရပါတယ် ။
Congratulations ပါ ။
စာရေးကောင်းတဲ့ မိန်းကလေး ကို အားလုံးမှတ်မိကြမှာပါလေ။
အရီး အသိ တစ်ယောက် ရဲ့ သားလေး ကတော့ ရေကျောင်းတက္ကသိုလ် ဆင်းပြီး တာနဲ့ လှိုင်းမူး မခံနိုင်ဘူး ဆိုပြီး ဘာမှ ဆက် မလုပ်တော့။
ပန်းစပယ် ပြောတဲ့ အကြောင်း တွေ ကိုတော့ အဘဖော က စပယ်ရှယ်လစ် ပါရဂူ ဖြစ်မှာမို့ သူလာရင် တော့ အတော်လေး ကောင်းမွန် ပြည့်စုံတဲ့ အကြံပြုချက်တွေ ရမှာပါ။
အရီးခင်ရေ အခုလို အားပေးတာ အားတက်ဝမ်းသာမိပါတယ်။
အချို့က သင်္ဘောပေါ်ရောက်စပဲ လှိုင်းမူးတတ်ပြီး နောက်ပိုင်းအေးဆေးဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောကြတယ်။ အချို့လည်း sea service ယူပြီး သင်္ဘောမတက်တော့ဘူးဆိုပြီး မိဘလုပ်ငန်းဝင်လုပ်ကြတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့ အရီးရယ်။
ကျမမောင်လေးလည်း sea service ယူတဲ့တစ်ခေါက်မှာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိုအများဆုံးဖြတ်ရတော့ လှိုင်းမူးတဲ့ဒဏ် တော်တော်ခံရပုံပဲ။ နောက်တစ်ခေါက်တော့ လှိုင်းသိပ်မမူးဘူးပြောတယ်။ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကို သိပ်မဖြတ်ရတာလည်း ပါမယ်ထင်ပါတယ်။
အရီးပြောသလို အဘဖောရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အကြံပြုချက်လေးတွေ အကျိုးရှိထိရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကို စောင့်မျှော်ရမှာပဲ။ အဘဖောအပြင် ကျမ မသိသေးတဲ့ အခြားလူကြီး လူလတ် လူငယ်တွေရဲ့ အကြံပြုချက် ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုရောပေါ့။
ဖွဘုတ်မှာ သွားရှယ်ထားတယ် ပန်းစံပယ်လေးးး ရေ။
အခုဆိုရင် မိန်းကလေး ပထမဆုံးတစ်သုတ် ဘွဲ့ရပြီးလို့ နောက်ထပ် တစ်သုတ်တောင် ပြီးခါနီးနေပါပြီ .. သူတို့တွေအတွက် အလုပ်အကိုင်က ပိုဆိုးတယ်။ သင်္ဘောသားလဲလုပ်လို့မရဘူးလေ … သင်္ဘောကျင်းတွေမှာကလဲ ယောက်ျားလေးကိုသာ လိုချင်ကြတာမို့လို့ အခက်အခဲရှိနေတယ် ..
နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ လူတော်တွေက ကျောင်းပီးလို့ သင်္ဘောတက်ဖို့ ဟိုလိုလိုဒီလိုလို ဖြစ်နေကတည်းက
နိုင်ငံတော်ရဲ့ လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆုံးရှူံးမှုလို့တောင် ပြောလို့ရနေပါပီ။။ ကုန်စည်တစ်မျိုးအား
၀ယ်လိုအားနဲ့ ရောင်းလိုအား မမျှတတဲ့ သဘောပေါ့ဗျာ.. လက်ရှိ သင်္ဘောသီးတွေအခြေအနေကတော့
တော်တော်ကို အတွင်းကြေဖြစ်နေပါပြီ။ သင်္ဘောသီးတွေတောင် အာမခံချက်မရှိတဲ့ အနေအထားတစ်ခုမှာ
သင်္ဘောသီးမှဲ့တွေ့အတွက်တော့ တော်တော်လွယ်ဘူးလို့ထင်တာပဲ။ သင်္ဘောသမီးတွေ အခြေအနေကောင်းဖို့တော့ ကိုရင်တို့နိုင်ငံ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးကောင်းရင်တောင် ငါးနှစ်လောက် မျှော်ရဦးမယ် ထင်တာပဲ။ ITF ရှိပေမဲ့ လက်ရှိ အာရှပေါက်ဈေးအရ အဲ့လောက်တော့ အာရှသားတွေကို ကမ်ပဏီတွေ့ ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့.. အဲ့တော့ ရွာထဲက အဘပြောတဲ့စကားပဲ ရေမြင့်ရင် ကြာတင့်ပါမယ်။ ကျွဲကူးရင် ရေပါလိမ့်မယ်။ ကြိုက်ရောင်းကြိုက်ဝယ်သဘောကို လက်ခံနိုင်ရင်တော့ သင်္ဘောသီးကြပါ…။ အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ တခြားလမ်းတစ်ခုသာ ပြောင်းကျပါလို့… :cool:
ကိုရင်စည် လောင်းတိုင်းနိုးဆီးပါလား။ ကျန်းခန့်သာလို့မာတော်မူပါစ။ ဒီပြသနာကတော့ဖြေရှင်းဖို့အဖြေတော့တွေ့နေပါပြီ။ လက်တွေ့အကောင်ထည်ဖော်မဖော်ကတော့ *******************
မမကြီး တီနဲ့ မမဇီဇီ… အားလုံးကို သတိရပါတယ်။ ၆လလောက် ထောင်ကျသွားလို့ပါ။
ခုမှ ထောင်က ပြန်လွှတ်လာလို့ပါ…။ ကိုယ်ကဗီလိန်းဆိုတော့ ထောင်မှူးက ဂွဇက်သုံးတာ မကြိုက်လို့ပါ..
အန်တီ တီ.. အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လက်တွေ့မှာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး.. အခု ဆာတီဖီကိတ်တွေ
နယူးဖော်မတ်နဲ့ ပြန်လဲပေးနေတာတောင် ပွဲစားလိုနေတယ်ဆိုကတည်းက အခြေယိုင်နေတုန်းပါပဲ။
လူကြီးတွေလည်း မသိတာမဟုတ်ပါဘူး.. သိပါတယ်.. ပရောဆက်ကြီးတစ်ခုလုံးကို လှန်ဖို့ဆိုတာ
သူတို့လဲ ရှေ့မျက်နှာတွေ နောက်မျက်နှာတွေ ရှေ့ထားနေရတယ်ထင်ပါ့….
ပြောပါတယ်.. တကယ်လုပ်မလုပ်တော့ ငါးနှစ်အတွင်းသာ စောင့်ကြည့်ပါ… အင်း.. အင်းး
ဖြစ်လှမယ်လည်း ကိုရင်တော့ သိပ်မမြင်လှတော့ပါဘူး.. အိုဘယ့် ကုန်သွယ်ရေကြောင်းအရာရှိလောင်း..
ကို/မ ခင်ဇော် (ဓာတ်ပုံကတော့ အမျိုးသမီးပုံပဲ၊ နာမည်က ယောက်ျားလေးနာမည်နဲ့တူနေသလားလို့ မသေချာမှာစိုးလို့…ဟီးဟီး) fb မှာ share ထားတဲ့အတွက်ရော ကွန်မန့်ပေးတဲ့အတွက်ပါ ကျေးဇူးပါနော်။
မ weiwei ရေ ကျမအဲဒီအကြောင်းကိုလည်းပဲ ပြောချင်နေတာကြာပြီ နောက်တစ်ခါမှ ရေးမယ်ဆိုပြီး ထည့်မရေးလိုက်တာ..။ အခုလို ကွန်မန့်ပေးတာ ကျေးဇူးပါရှင်။
ကိုရင်စည်သူ says: “နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ လူတော်တွေက ကျောင်းပီးလို့ သင်္ဘောတက်ဖို့ ဟိုလိုလိုဒီလိုလို ဖြစ်နေကတည်းက
နိုင်ငံတော်ရဲ့ လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆုံးရှူံးမှုလို့တောင် ပြောလို့ရနေပါပီ။”
ကိုရင်စည်သူရေ. ကျမလည်း အဲဒီအချက်ကိုပဲ ပြောချင်တာ. အခုလို.ပြောပေးလို့ ကျေးဇူးပဲ။
ပြောပေးလို့ ကျေးဇူးတင်စရာလိုပါဘူး ဒေါ်စံပါယ်.. ကျနော်က သင်္ဘောသားတစ်ယောက်
ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် သင်္ဘောသီးနဲ့ သင်္ဘောသီးလောင်းတွေ အကျပ်အတည်း တင်ပြလို့
ကျေးဇူးပါ။ သြော်ဘယ့် သင်္ဘောသီးသံယောဇဉ် CDC စာအုပ်နဲ့ ရေကြောင်းပတ်စပို့ အပ်ပီးတောင်
အဲ့အကြောင်းတွေရေးရင် ပြောချင်နေစမြဲ.. ပလုံ..
အသံလေးပြန်မြင်လိုက်ရတာ တကယ်ဘဲ ဝမ်းသာလှတယ်။
လူညွန်း လိုက်တုန်း က ကိုရင်လေး ကိုပါ သတိရလိုက် သပေါ့။
ဒါပေမဲ့ မလာတာ ကြာတော့ ရွာ နဲ့ အတော်ဝေးပြီး အလုပ်ရှုပ် နေတယ် ထင်လို့ နီးရာ ရှိတဲ့ အဘဖော ကိုဘဲ ညွန်းလိုက်ရတာ။
လိုတဲ့နေရာ မြင်ရင်မနေသာဘဲ ဝင်လာဖြေပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
သင်းဘောသီး ကို တကယ်ဘဲ စွန့်ခဲ့တာလား။
အင်းးး ။ ကျနော် အခု ရန်ကုန် ရောက်နေတော့ ။
ရန်ကုန် ရဲ့ Internet Connection ကို စိတ်ကုန်လို့ ဘာမှ မရေးဘဲနေနေတာ ။
အစကနေ သေချာ နားလည်သွားအောင် ပြန် ရှင်းပြရရင် ။
အစကတည်းက ရေကြောင်းတက္ကသိုလ် ဟာ သင်္ဘောလိုက်ဖို့ လုပ်ထားတာ မဟုတ် ။
သာမန် B.Sc. & B.E. ဘွဲ့တွေ ပေးဖို့သာ ဖွင့်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ ပထမ အသုတ် ကျောင်းသားတွေက ဝိုင်းအရေးဆိုကြတဲ့အတွက် ၊
သင်္ဘောလိုက်ခွင့် မပေးရင် ဆန္ဒပြကြမယ့် အခြေအနေ အထိဖြစ်ခဲ့လို့သာ ၊
အဲဒီ အချိန်က လူကြီးတွေက သင်္ဘောလိုက်ခွင့် မပေးချင်ဘဲ ပေးခဲ့ရတယ် ။
အဲဒီမှာ ၊ ရေကြောင်း ကောလိပ် ( MMMC / IMT ) က တစ်နှစ်ကို သင်္ဘောသား ၃၀၀ ၊
ရေကြောင်းတက္ကသိုလ် ( MMU ) က တစ်နှစ်ကို သင်္ဘောသား ၃၀၀ ၊
စုစုပေါင်း တစ်နှစ်ကို သင်္ဘောသား ၆၀၀ နှစ်စဉ် တိုးလာခဲ့တယ် ။
တကယ်က သင်္ဘောသား အလုပ်အကိုင်က နှစ်စဉ် ဒီလောက်မှ မတိုးဘဲဟာ ။
ပြောရမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတော် အဆင့် / ဝန်ကြီး အဆင့် ငတုံးကြီးတွေရဲ့ ၊
ဥာဏ်ပညာ အားနည်းမှု ကြောင့် ၊ သင်္ဘောသား ဈေးကွက် ပျက်သွားရတယ် ။
စင်္ကာပူ နိုင်ငံမှာ ဆိုရင် ရေကြောင်း သင်တန်းတက်ဖို့အတွက် ၊
သင်္ဘော ကုမ္ပဏီကြီးတွေက သင်တန်းပြီးရင် အလုပ်ခန့်ပါမယ် ဆိုတဲ့ ၊
တာဝန်ခံတဲ့ Guarantee Letter ပါမှ ရေကြောင်း သင်တန်းတက်ခွင့် ပေးတယ် ။
အခုတော့ ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ ရှေ့နားပိုင်းက လူငယ် လူတော်လေးတွေ ၊
ဦးတည်ချက်ပျောက် ၊ လမ်းကြောင်း လွဲပြီး ၊ အလဟသ ဖြစ်နေရတယ် ။
နောက် မထင်ထားမိတာ တစ်ခုက ၊
အဘ တို့က ၊ အဘ တို့ရဲ့ ရေကြောင်း လောကထဲကို ၊
တိုင်းပြည်ရဲ့ ရှေ့နားပိုင်းက လူငယ် လူတော်လေးတွေ ရောက်လာတဲ့အတွက် ၊
( အစပိုင်းမှာ ) ဝမ်းသာခဲ ကြိုဆိုခဲ့ကြတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ၊ အဘ တို့ရဲ့ အထင်တွေ မှားနေတာကိုတွေ့ရတယ် ။
အဲဒီ MMU ဆင်း လူငယ် လေးတွေဟာ ၊ မာန ထောင်လွှားလွန်းတာကိုတွေ့ရတယ် ။
အမှန်ဆိုရင် ၊ အဘ တို့ အတွက် Cadet ဆိုတာ ခိုင်းဖတ် / ကျွန် လိုချင်တာပါ ။
အခုတော့ MMU ဆင်း Cadet တွေက မာန ထောင်လွှားလွန်းတယ် ။
( အဲဒီတော့ တစ်ချို့ လိုင်းတွေက MMU ဆင်း Cadet ကို မခေါ်ချင်တော့ဘူး )
သိပ်မကြာခင်လေးတင်ကဘဲ ၊ MMU ဆင်း 3rd Officer ပေါက်စ တစ်ကောင်က ၊
လစာ အရမ်းကောင်းတဲ့ Hanseatic လိုင်းက ၊ German သူကြီး တစ်ယောက် နှင့် ငြိရာက ၊
( အဲဒီ အဖြစ်အပျက်မှာလဲ German သူကြီး မမှားဘူး ၊ အဲဒီ MMU ဆင်း 3rd Officer မှားတာ )
German သူကြီး က ချက် နှင့် လက် နှင့် Owner ပိုင်ရှင်ကို တိုင်ထည့်လိုက်တာ ။
အဲဒီမှာ ၊ Owner ပိုင်ရှင် က ၊ မြန်မာ လူမျိုး သင်္ဘောသား တွေ အပေါ် စိတ်ကုန်သွားပြီး ၊
သူ ပိုင်တဲ့ သင်္ဘော ၂၂ စီး စလုံးပေါ်က ( သင်္ဘော ၂၂ စီး နော် ) ၊
မြန်မာ လူမျိုး သင်္ဘောသား တွေ အားလုံးကို ( မြန်မာ လူမျိုး အားလုံး ) ၊
အလုပ် ဖြုတ်ပြစ်လိုက်တယ် ၊ မြန်မာ လူမျိုး လုံးဝ ကို ထပ် မခေါ်တော့ဘူး ။
အခု နောက်ပိုင်းမှာ ၊ မြန်မာ လူမျိုး သင်္ဘောသား တွေကို လူကြိုက် နည်းလာပြီ ။
ဥပမာ ။ ။ နာမည်ကျော် Maersk လိုင်း ရဲ့ Container သင်္ဘောတွေမှာ ၊
မြန်မာ လူမျိုး သင်္ဘောသား တွေ ( ထပ် ) မ ခန့်တော့ဘူး ။
မြန်မာ လူမျိုး သင်္ဘောသားဟောင်းကြီးတွေ ၊
နှစ်ပေါင်း မြောက်များစွာ တည်ဆောက်ခဲ့ရတဲ့ ဂုဏ်သတင်းတွေ ပျက်ပျယ်ခဲ့ရတယ် ။
( အဘ ရဲ့ ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက်ကို ပြောရရင် အဘ လည်း MMU ဆင်းတွေကို မကြိုက်ဘူး )
အဲဒီတော့ကာ ၊ နောက်ဆုံးတော့ Demand & Supply ပါဘဲ ။
သင်္ဘော ကုမ္ပဏီ / Rep တွေက အသာစီးရ အနိုင်ကျင့်လာကြတယ် ။
( အမှန်ကတော့ ကိုယ်ကလည်း ဖင်ယားပြီး စာချုပ် သွားချုပ်တာကိုး )
( ဘယ်သူကမှ စာချုပ် မချုပ်ရင် သတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာမှ မဟုတ်ဘဲ )
( ဘယ်သူ မပြု မိမိ မှု ပါဘဲ )
အဘ သိရသလောက် ၊ သင်္ဘော ကုမ္ပဏီ နှင့် စာချုပ်မိနေတယ် ဆိုရင်တောင်မှ ၊
လက်မှတ် အစုံ နှင့် Ready ဖြစ်ပြီ ဆိုပြီး သတင်းပို့ထားပြီးနောက် ၊
တစ်နှစ် ပြည့်တာတောင်မှ သင်္ဘော တင်မပေးနိုင်ဘူး ဆိုရင် ၊
စာချုပ်မိနေတဲ့ သင်္ဘောသားက တခြား သင်္ဘော ကုမ္ပဏီ နှင့် ထွက်ခွင့် ရှိပါတယ် ။
MMU ဆင်း OOW အောင်ကာစ ကောင်လေးတွေ ၊
တစ်ချို့ OS ရာထူး နှင့် ( AB မဟုတ် ) ပြန်ထွက်ကြတာတော့ တွေ့နေရတာဘဲ ။
( အဘ ဆိုရင်လဲ သူတို့ကို လွန်ရော ကျွံရောပေးလှ AB ဘဲပေးမှာပါ )
( နို့ ၊ ဘာ အတွေ့ အကြုံမှ သိပ်မရှိဘဲကိုး ၊ AB တောင် လွန်လှပြီ )
သင်္ဘော ကုမ္ပဏီတွေ က သိပ်မတရားဘူးလို့ ထင်နေရင်တော့ ၊
MSF ကိုသာ တိုင်လိုက်ပါတော့ ။
အဘဖောရေ အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
အဘပြောသလို မာန်ထောင်လွှားတယ်ဆိုတာလည်း ဟုတ်တယ်။ အချို့ sea service ယူတဲ့အခေါက်မှာပဲ အဆင်မပြေ အကြီးအကြယ်ငြိကြတာတွေလည်း ကြားရတယ်။ မစခင်ကတည်းက ဒါတွေအားလုံးကို သိရှိနားလည်ထားပြီးမှ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပေမယ့် မိဘရော ကျောင်းသားရော ကျောင်းပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်း လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုပ်ရမယ့်အလုပ် အခြေအနေ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝတွေကို မသိ နားမလည်ပဲ ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့အရာကို ဘွဲ့ရယ်၊ သင်္ဘောတက်ရတယ်ဆိုတာရယ် မြန်မာပြည်တွင်းမှာထက် ၀င်ငွေပိုရတယ်ဆိုတာလောက်ပဲသိပြီး ရွေးချယ်လိုက်ကြတာ များမယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လက်တွေ့မှာကျတော့ ထင်မှတ်မထားတဲ့အလုပ်တွေ အခြေအနေတွေနဲ့ တွေ့တော့မှ အဆင်မပြေတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့။ ဘာနဲ့တူနေလည်းဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျောင်းသားရော မိဘရော အခြေအနေအရပ်ရပ်အရ ဆင်ကန်းတောတိုးဖြစ်နေကြတယ်။ အချို့ မိဘကလည်း လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝမသိ နားမလည်တဲ့အပြင် မာန်မထောင်လွှားပဲ မိမိကိုယ်မိမိနှိမ့်ချတတ်ဖို့ သွန်သင်မှု လမ်းညွှန်မှု အကြံပေးမှု မပြုနိုင် (မပြု) တာလည်း ပါမယ်ထင်ပါတယ်။ အချို့လည်း သွန်သင်လျက်နဲ့ မလိုက်နာတာလည်း ရှိမှာပါ။
စကားစပ်လို့ — ကျမမောင်လေး sea service ၁ နှစ်ယူဖို့အတွက် ခရီးထွက်ခါနီးမှာ မေမေ နဲ့ ဖေဖေတို့ကပြောတယ်။ ဒါဟာလည်း ပညာသင်ယူဖို့ ဆရာအသစ်ဆီသွားတာပဲ ကျောင်းကနေစာတွေသင်သင့်သလောက်သင်ပြီးလို့ နောက်ထပ်လက်တွေ့ပညာတွေ သင်ယူဖို့ နောက်တစ်နေရာက သင့်တော်တဲ့ဆရာဆီ စေလွှတ်တာနဲ့ အတူတူပဲတဲ့။ ဒါကြောင့် မိဘအိမ်မှာတုန်းက ဘယ်လိုပဲနေရပေမယ့် ဆရာထံရောက်သွားတဲ့အခါ ဆရာအပေါ် တပည့်တစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန် ကျေရမယ်ဆိုတာတွေ ပြောတယ်။ ရှေးတုန်းက ပညာသင်ပေးဖို့အတွက် တပည့်ခံခွင့်ရဖို့အတွက် ဘယ်လိုစမ်းသပ်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေရော အောက်ခြေသိမ်းကအစ လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ရင် ခြေဆုပ်လက်နှယ်ပြုပေးဖို့အထိပြောပါတယ်။ ကျမတို့ မိဘတွေက တောင်သူလယ်သမားတွေမို့ ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း သင်္ဘောတက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်္ဘောပေါ်မှာ ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာတွေကို အရင်ကရော အခုထိရော သေချာတိကျမသိပေမယ့် အဲဒီလို သွန်သင်ဆုံးမပါတယ်။
အခြားအခြားသောလုပ်ငန်းခွင်မှာ လုပ်ရတဲ့အလုပ် အခြေအနေ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝနဲ့ သင်္ဘောသားတွေရဲ့ အလုပ် အခြေအနေ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝက လုံးဝခြားနားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်တာပါ။ အိမ်တစ်အိမ်မှာ အတူနေကြတဲ့သူတွေလိုပါပဲ။ ဒီအိမ်ရဲ့ လုံးခြုံရေး အန္တရယ်ကင်းရေး သန့်ရှင်းရေး အားလုံးကို ဒီအိမ်မှာနေတဲ့သူတွေက သူ့နေရာနဲ့သူ ကျရာတာဝန်ကို လုပ်ရတဲ့သဘောနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေအိမ်သန့်ရှင်းရေးလည်း လုပ်ကောင်းလုပ်ရနိုင်တယ်။ ကြမ်းလည်း တိုက်ကောင်း တိုက်ရနိုင်တယ်။ အကြီးအငယ်ပေါ်မူတည်လို့ အကြီးက ခိုင်းတာလည်း လုပ်ရနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် မိဘများရော ကာယကံရှင် ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်တက်မည့်သူများ (သင်္ဘောတက်ရတဲ့လိုင်း) အနေနဲ့ မလွန်ခင်မှာ အဘဖောပြောတာတွေကို သိရှိထားဖို့ အရေးကြီးတယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို အများ နားလည်သိရှိအောင် အများသိနိုင်တဲ့ ထိရောက်တဲ့ တစ်နည်းနည်းနဲ့ ပညာပေးနိုင်ရင်ကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါမှ နိုင်ငံအတွက်လည်း လူစွမ်းအားအရင်အမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေ နည်းအောင် ကာကွယ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ပန်းစံပါယ်ရဲ့ပို့စ်ကဗဟုသုတကော အဘဖောရဲ့ကွန့်မန့်ပါ ကူးသွားပါတယ်